Ciidamo Katirsan DF-ka Oo Lagu Weeraray Degmooyinka Yaaqshiid iyo Howlwadaag.
Monday April 09, 2018 - 19:44:03 in Wararka by Super Admin
Xoogag hubeysan ayaa caawa Maqribkii weerar ku qaaday bar koontarool oo ciidamo katirsan dowladda Federaalka ay uga sugnaayeen degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyo is xig xigay ayaa laga maqlay isgoyska Howlwadaag oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamo Boolis ah, dadka deegaanka ayaa sheegay in weerar Bambaano lagu qaaday ciidamada kadibna waxaa lamaqlayay rasaas xooggan oo ay furayeen ciidamada la weeraray.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Bambaanooyinka kadib iska hor'imaadyo fool ka fool ah ay dhaxmareen ciidamada ku sugan isgoyska iyo xoogaga weerarka qaaday.
Dhinaca kale weerar loo adeegsaday Bambaanooyin ayaa caawa fiidkii lagu qaaday Laanta Towfiiq ee degmada Yaaqshiid, Qof Goob jooge ah ayaa SomaliMeMo u sheegay in ay maqleen jugta laba qarax kadibna waxaa xigay rasaas lays weydaarsanayay.
Xarakada Al Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay weeraro ku qaadaysay koontaroollada ay ciidamada DF-ka uga suganyihiin magaalada Muqdisho.
Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab ayaa ku goodiyay in ay sare uqaadi doonaan weerarada ka dhanka ah ciidamada DF-ka isagoona shacabka ugu baaqay in ay ka fogaadaan isku imaatinnada ay ciidanku uga suganyihiin magaalada caasimadda.